CXD oo howlgal ka sameeyay gobolka Shabeelaha dhexe | KEYDMEDIA ONLINE
CXD oo howlgal ka sameeyay gobolka Shabeelaha dhexe
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay deegaanada Hirshabeelle ayaa howlgal ka sameeyay gobolka Shabeelaha Dhexe.
JOWHAR, Soomaaliya - Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 3 -aad qeybta 27 -aad Xoogga Dalka Soomaaliyeef ayaa howlgal Amniga lagu xaaqiijinayay islamarkaasna lagula dagaalamayay miinooyinka ku aasan inta udhexeeysa degmada Balcad iyo degaanka Qalimoow ee Gobolka Shabeellaha dhexe ka sameeyay wadadaasi.
Howlgalka ayaa intii uu socday waxay Ciidanka ku Qarxiyeen kudhawaad 5 miino oo kooxda Al-Shabaab ay ku aaseen inta udhexeeysa Degaanada Gololeey iyo Raaxooy oo ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe.
Taliyaha Guuto 3 -aad qeybta 27 -aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Abshir Maxamud Maxamad oo howlgalka hoggaaminyay lana hadlayay warbaahinta Afka ciidanka ku hadasho ayaa sheegay in ujeedka Howlgalka uu ahaa nadiifinta qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka ku socdaala inta u dhexeeysa degmada Balcad iyo Qalimoow ee Gobalka Shabeellaha Dhaxe.
Dhowr mar oo hore ayey ku qaraxday miino la dhigay waddada dhinaceeda dad shacab ah oo waddada marayay iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ee ka howl gala degaannadaasi.